Ọnụ ụzọ mpempe aka maka Office Building China Manufacturer
Nkọwa:Uche Ụlọ Nzukọ Ugbua nke a na iko,Dị ka Hite Glass Door Texture,Ebube Nwepu Nchekwa Sistemụ Na-emezighị emezi
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Ọnụ ụzọ mpempe aka maka Office Building
Ihe Nlereanya.: HF-J471
Ọnụ mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka maka ụlọ ọrụ
Enwere ụzọ atọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ọnụ ụzọ nke oge a.
Ụdị pedal ụkwụ 1: a na-etinye mgbanaka nrụnye n'okpuru pedal.
3 bọtịnụ bọtịnụ: Pịa bọtịnụ dị ka mgba ọkụ iji mepee akwukwo akwukwo. Ọnụ ụzọ na-emeghe mepee ma mechie akwukwo akwukwo site na igbanyere, ihicha ma obu mpia. Iji gbochie ohi, ngwá ọrụ pụrụ iche ga-arụ ọrụ n'otu oge ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa ka a kwadebere ụlọ mpempe aka maka ụlọ dịka onye nwere njirimara onye njirimara ma ọ bụ telivishọn, na ndị ọrụ na-anọghị n'ụlọ na-egbochi ya. A na-eji ụzọ mgbochi eme ihe na ụlọ ahịa ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọdụ ụgbọelu, ụgbọ, akụ na oge ndị ọzọ.
A na-emepe ya na-akpaghị aka ma mechie ihe ịrịba ama dị iche iche, ma nwee okwu n'ozuzu maka ngwaọrụ eji arụ ọrụ, ịchọta ngwaọrụ, na ụzọ ụzọ. (Ọnụ ụzọ ndị na-agbagha agbagha na-akọwapụta ọnụ ụzọ ámá n'èzí.)
Uche Ụlọ Nzukọ Ugbua nke a na iko Dị ka Hite Glass Door Texture Ebube Nwepu Nchekwa Sistemụ Na-emezighị emezi Relọ nkwakọba nke siri ike Ụlọ elu ngwa ngwa ngwa Nche ụlọ ọrụ ngalaba Mmepe Ụlọ ahịa nke na-ere ahịa Quicklọ nkwakọba ngwa ngwa